Libanona: Dika sy Vokany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Novambra 2017 6:39 GMT
Ny ambangovangony amin'ity herinandro ity dia safidy avy aminà lahatsoratra miresaka dika sy ny vokany. Ohatra, ny dikan'ny hoe lehilahy maoderina ao Libanona, na ny maha-avy amin'ny havia ary ny vokatry ny tsy fitandremana any amin'ireo vondrom-piarahamonina ambanivohitra sy ny fandaozana ny fambolena, amin'ny maha-fitaovana famokarana azy. Trandrahan'ireo lohahevitra sasany indray ireo taham-pahantrana vaovao ao Libanona sy ny fomba fiantraikan'ny adilahy politika eny aminì'ireo tanora mpianatra.
Momba ny dika:
Ana Min Beirut no manoratra ny hevitry ny hoe lehilahy maoderina :
Lehilahy maoderina aho, lehilahy natao ho an'ny taonarivo. Dizitaly ary tsy mpifoka. Mpandika hevitra amin'ny lafy maro, miaina kolontsaina maro sy nentin'ny vaninandro maoderina diso ara-politika, ara-drafitra ary ara-tontolo. Nampifandrozihana aho no sady notrohana (téléchargé), asa natao tendry milina sy navoaka ho sahanina any ivelany, haiko ireo tombontsoa azo amin'ny famerenana mandrefy ny fetra, haiko ny fahavoazana ateraky ny fampanarahana fenitra. Fiainana reraky ny teknolojia avo lenta no ananako. Milina iray raitra farany ary mahay asa maro aho, saingy toy ny sabatra roa lela, ary afaka manome anareo “gigaoctet” anatin'ny fepotoana “nanoseconde” ! Andiany iray vaovao saingy efa sekoly tranainy aho ary ny zanako ao anaty dia mifandrohy amin'ny any ivelany. Mpanjifa iray sariaka aho, mavitribitrika, mamohehatra, baikoana amin'ny feo ary mora levon'ny natiora. Manana fifandraisana amin'ny angondrakitro aho, izy io dia any anatin'ny tontolon'ny cyber, araka izany dia afaka idirana amin'ny fomba rehetra na aiza na aiza. Tena faran'izay mihetsiketsika tokoa ary indraindray dia mandefa taratra mampidi-doza (radioactif).
Jij manoratra momba ny dikan'ny maha-avy amin'ny hery ankavia ao Libanona (ary mahakasika lohahevitra hafa maro) :
Midika inona ny maha-avy amin'ny havia ao Libanona? Na eo aza ireo mpikambana efatra sa dimy tavela ao amin'ny Hetsika Ankavia Demaokratika, mino aho fa ny maha-avy amin'ny havia ao Libanona dia mifototra aminà fotokevitra filamatra telo : 1 fampiroboroboana fiarahamonina iray efa anjato taona maro, izay ny maha-izy ara-tsosialy, ara-kolontsaina sy ara-tantaran'ny tsirairay dia tsy voafaritra mialoha ao anatiny ao no sady tsy latsapaka amin'ny fisiany ao anatin'ny foko niaviany . 2 tohana iray ara-toekarena izay ny tanjona faratampony dia ny hampiroborobo ny fiainan'ireo singa faran'izay tsy manan-koraisina ao anatiny (fa tsy vao mainka hampanankarena bebe kokoa ireo efa mpanefoefo), ary fanoherana mazava tsara ireo politka tsy mifaditrovana ary mandravarava ataon'ny “neolibéralisma”. 3 fandàvana ny “neokolonialisma” sy ireo olony rehetra ny amin'ny faritra.
Bech manazava ireo tranganjavatra niseho tao Libanona ho toy ny zavatra mahazatra rehefa misy fiovan-kery:
Raha misaina izany ianareo amin'izao fotoana izao, izay niseho tao Libanona tato anatin'ny taona vitsy dia ohatra mahazatra amin'ireo fiovaovàn'ny tendron-kery samihafa. Tsy maintsy jerena ireo fiovàna mitranga eny anivon'ireo sampandraharaha sy birao(m-panjakàna na mifandray aminy), izay miandraikitra ny resaka filaminana, indrindra indrindra raha tiana ny hahatakatra ilay politika tapi-dàlan-kaleha izay ilentehantsika tsikelikely.
Momba ny vokany:
Abu Ali no manoratra ny vokatry ny fitontongan'ny fiarahamonina eny ambanivohitra sy ny fàka itsirian'ny tsy fitoviana
Ny lova ara-kolontsaina sy ara-tontolo iainana ao Libanona dia mifàka lalina ao anatin'ny fiarahamoniny eny ambanivohitra. Ny fomban-drazanay sy ny sakafonay, ny vakodrazanay dia voatahiry ho velona noho ny fisian'ireo fianakaviana tantsaha madinika. Rehefa nampahantraina sy nahilikilika ireo vahoaka eny ambanivohitra, navelan-dry zareo ny taniny, ny kolontsainay, mikororosy ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana. Misy fiantraikany goavana io : miteraka hadisoam-panantenana ny fahantràna, hadisoam-panantenana manome vàhana ny herisetra politika. Ny fahalevonan'ny fifandraisana misy amin'ny olona sy ny tany dia mamorona endrika firenena tantsaha mandalo fotsiny ihany, firenena misy mpiasa saingy tsy olompirenena. Ampahany iray lehibe amin'ny olan'i Libanona io.
EDB manoratra momba ny fomba fiantraikan'ny toedraharaha politika amin'ireo mpianatra. Lasa famerenana hiatrehana ady an-trano ilay fivoahana tsy manantsiny avy any an-tsekoly (miresaka lohahevitra hafa ihany koa ilay lahatsoratra) :
Tsy ela akory izay ny namako R., mpampianatra aminà lisea tsy miankina iray manana ny hajany, no nanaraka ireo mpianany nisinda kely ny sekoly handeha hilalao “paint-ball” (basy ifampitifirana loko). Avy hatrany izy ireo dia nitsinjara ho ankolafy politika isan-tsokajiny, PSP sy “Futur” manohitra ny Hezbollah ary FPM. “Toy ny savaranonando amin'ny ady,” hoy i R. miaraka amin'ilay hatezerana ahafantarana azy. Isaky ny misy mpianatra voa—araka ny fitsipika—dia miala tsy milalao, ary dia ampiasain'ireo namany tao anaty tarika ho toy ny ampinga olombelona (fiarovana) izy.
Siestske in Beiroet manoratra momba ny fanadihadiana natao vao haingana momba ny fahantràna sy ny atao hoe mahantra ao Libanona.
Araka ny fanadihadiana iray vao haingana nataon'ny PNUD ho an'ny Ministeran'ny Raharaha Sosialy dia 25 % amin'ny Libaney no miaina ambanin'ny fetra farany ambany amin'ny fahantràna amin'izao fotoana izao. Ny hoe mahantra ao Libanona dia tsy hoe fotsiny kely ny vola miditra aminao, fa koa tsy afaka mahazo rano madio ianao, tsy afaka mandeha an-tsekoly ary tsy manana hialofana. Vaovao toa tsara ihany ireo, satria folo taona laza izay, nanodidina ny 30% io taha io. Niakatra ny taha ho an'ny trano fialofana, ny fanabeazana ary ny rano, fa nidina teo amin'ny 9% eo ho eo n an'ny vola miditra ho an'ireny olona ireny.
Izay aloha ny ho an'ny anio, mirary soa ho anareo mandra-pisin'ny fanavaozana manaraka indray.